Naqshadeeye - FOSHAN GOODTONE FURNITURE CO., LTD
Peter Horn, aasaasaha Horn Design and Engineering, waxa uu ku qaatay 15kii sano ee la soo dhaafay abuurista iyo horumarinta qalabka xafiisyada iyo hababka ergonomic synchro-tilt.
Martin Ballendat, aasaasaha Design Ballendant, wuxuu hogaamiyay kooxdiisa naqshadaynta hibada leh si ay isugu geeyaan tignoolajiyada, wax ku oolka iyo farshaxanka naqshadaha fudud ilaa 1995.
Waxa uu aaminsan yahay in kaliya marka la isku daro naqshadeynta ganacsiga oo kor loogu qaado heerka istaraatiijiyadeed ee ganacsiga, iyo si xeeladaysan loo xalliyo dhibaatooyinka horumarinta, ay kor u qaadi karto guusha ganacsiga.
Naqshad Joyn oo ka timid Kuuriyada Koonfureed.Raadinta Joyn ee falsafada naqshadeynta ayaa hogaamineysa qaab cusub oo moodo ah, qalooca ka-hortagga, isku-dhafka midabka caanka ah iyo naqshadeynta ergonomic ee tirada badan.
Sida CCO ee Kooxda Naqshadeynta Caalamiga ah ee Alaabta Xcellent ee Taiwan, Ader Chen wuxuu hore uga soo shaqeeyay Palo Alto Design Group iyo Flextronics International, isagoo soo ururiyay khibrad ballaadhan oo ku saabsan fulinta naqshadaynta caalamiga ah iyo maamulka.
Goodtone waxay u qaadataa naqshadeynta fikradda ugu dambeysa.Xidhiidh kastana waxaa wada naqshad.Waxay soo ururisaa naqshadeeyayaasha maxalliga ah ee heer sare ah, waxayna gaadhay iskaashi istiraatijiyadeed oo ay la yeelato naqshadeeyayaasha caalamiga ah ee ugu sarreeya sida Jarmalka iyo Maraykanka.Iyada oo leh ilo badan oo naqshadeed oo heer sare ah, Goodtone wuxuu si joogto ah u soo bandhigay naqshad ka wanaagsan si loogu adeego suuqa.Waxayna ku dadaalaysaa in ay dhisto astaanta kursi ee asalka ah ee Shiinaha oo leh saameyn caalami ah.
Haddii aad rabto inaad wax badan ogaato, waad ila soo xidhiidhi kartaa